Fijery nipoaka ny Apple Watch amin'ny antsipiriany feno | Avy amin'ny mac aho
Misy roa andro mandra-pahatongan'ireo singa ao Apple Watch manomboka manatona ny tompony ary azo antoka fa Malagasy iFixit dia ho iray amin'ireo voalohany handrava singa iray hijerena ny fomba nananganana azy. Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny sary vitsivitsy izay na dia afaka mandalo aza izy ireo, tsy inona izany fa ny fandikana noforonin'ilay mpamorona malaza Martin Hajeck.
Ireo sary asehonay anao eto ambany dia aseho miaraka ny atin'ny lasa fahombiazan'ny Apple vaovao.
Mazava fa amin'ny fandikana dia tsy afaka mahatratra ny ambaratonga mitovy amin'ny antsipiriany izay ho tratranao iFixit rehefa apetrakao amin'ny tananao ny iray amin'izany, fa manome hevitra somary henjana momba izay mety ho ao anatin'ity Apple Watch vaovao ity.
Raha manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahan'ity mpamolavola ity mahalala hoe toy ny ahoana ny atin'ny Apple Watch, ny valiny dia avy amin'ny aingam-panahy avy amin'ny tsirairay amin'ireo horonan-tsary niavian'ilay orinasa izy, navoaka tsikelikely mba hanomezana azy doka.
Tsarovy fa ao amin'ny fantsona YouTube an'i Apple dia azonao atao ny mahita ireo horonantsary naseho tamin'ny 9 martsa, izay ahitàna ny fizotry ny famokarana ny maodelin'ny alimo, vy ary volamena. Tsy maintsy miandry fotsiny isika izao raha nahita hoe nahomby ity mpamorona ity na angamba tamin'ny foto-kevitra sasany no nifindrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Fijerena Apple Watch amin'ny antsipiriany feno
Daty famandrihana mety ho an'ny Apple Watch any Espana